Masiki → Mbatya dzebasa • nyanzvi P & M yekushongedza kwemakomputa
Masiki anodzivirira dzinogona kubatsira zvakanyanya mukudzivirira kupararira kwehumwe hutachiona hwechirwere chekufema. Vari nhovo yakanaka kune yedu yekufema system. Iyo masks yakadaro, inofukidza mhino nemuromo, inodzivirira kupinda kwemidziyo inokuvadza, asi zvakare inodzivirira maoko akasvibiswa kuti asabata kumeso. Kunyangwe zvakadaro, kupfeka mask hakuvimbisi kuchengetedzwa kubva kutapukirwa.
Iko kushandiswa kwemaski ekudzivirira kunofanirwa kuve pamwe pamwe nedzimwe nhanho dzekudzivirira kutapukirwa.
Imwe yemitemo yakakosha ndeyokutevera hutsanana hwemaoko uye kufema systempamwe nekudzivirira kusangana padhuze, zvakanakisa kuchengeta chinhambwe chingangoita mita imwe kubva kune vamwe. Nekushandisa iyi mishoma mitemo iri nyore isu tiri kubatsira kwazvo kudzivirira kusangana nehutachiona.
Shanyira yedu online chitoro >>
Masks ekudzivirira akakamurwa kuva:
Zvizhinji zvinoenderana nezvinyorwa kubva kwavari zvavakashambwa. Maski sechinhu chekupfeka chebasa chinogona kuve chikamu chezvipfeko zvezuva nezuva zvevashandi. Izvo zvinonyanya kuwanikwa mumishonga yemishonga inogadzirwa nonwovens, gura zvakananga uye zviri nyore kuisa, asi inofanira kuraswa mushure mekutanga kushandiswa.
Inodzivirira mask Cotton yakashata nhema yakasungwa inowanikwa mune yedu online chitoro >>
Cotton masks ivo vakanyanya kushanda zvekuti zvakaringana kuzvimisikidza pakudziya kwakanyanya kuti ugone kuvashandisazve. Nechinangwa ichi, zvakakwana kushamba pamakumi matanhatu madhigirii, unokwanisa kuvabvisa mabhenekete nesimbi ine simba rakanyanya kana nekubika mumvura inovira. Zvakare, kuuraya mishonga masiki negadziriso yakagadzirwa neinodonhedza 60% doro rinoshanda. Ingosvina mask neiri uye mirira kuti iome.
Kunyangwe paine pfungwa yakapararira nezvekusaita kwekudzivirira kwemaski, zvakakodzera kutarisisa nekuti nyangwe mask isina kukwana inogona kugadzira jasi rekudzivirira, rakafanana nemhedzisiro yegaro rinokurudzirwa remamita maviri mukudyidzana nevamwe.
Kupfeka mamaski kumeso kana zvichidikanwa kwemaawa akawanda?
Nehurombo, kune vazhinji vedu, kupfeka masiki zvinonetesa, kunyanya kwemaawa akati wandei pazuva. Iwe unogona kubva wanzwa kushaya mweya kana kudonha nekuda kweiyo shoma oxygen.
Kuti uderedze kusagadzikana kunokonzerwa nekupfeka mask iyo nguva dzose, iwe unongofanirwa kuyeuka iyo mitemo yakapusa. Chekutanga pane zvese, pfeka mask kana zvichidiwa. Kana isu tisina kudyidzana nevanhu vanobva kunze uye tisiri munzvimbo dzeveruzhinji, zvakakodzera kuti tiritore, kunyange kwemaminetsi akati wandei. Nguva pfupi yekuzorora ichakubvumira kuti uzorodze uye oxygenate.
Izvo zvakare zvakakosha kuve nemashoma anoshandiswazve mamask. Statistically, munhu mumwe anotenga anenge 8-10 masiki (uye anoatenga kana asakara), kuitira kuti vagone kuchinja masikati uye kuwacha - zvichienzaniswa nenzira yatinoita nezvipfeko zvemukati. Kana isu tichifanira kunge tiri munzvimbo yakavharika, zvinofanirwa zvakare kuvhura hwindo uye kufema zvakadzama. Isu tichaona mutsauko mune manzwiro aunoita kakawanda uye zvakare.
Streetwear yebhuruu yekudzivirira mask yemukanwa nemhino inowanikwa mudura redu repamhepo >>
Masiki angatibatsira sei muhupenyu hwezuva nezuva?
Iyo masiki yakagadzirirwa kuchengetedza yedu yekufema system. Kunyangwe kuwedzera kwayo kukurumbira kwakakonzerwa nedenda, zvakakoshesa kuterera mune izvo mamwe mamiriro kushandiswa kwaro kuchatibatsirawo kuchengetedza hutano hwedu.
Kwemwedzi yakawanda tagara tichitambira ruzivo nezve irwo rwezvino kubva kuma media smog mushumokubva kwauri iwe unogona kuona kuwedzera kwekusvibiswa panguva yekudziya. Kukura kwayo kwakanyanya ndiko kune ngozi kwazvo mumakuru akanyanya ane simba rakakura rekutakura uye nezvirimwa zveindasitiri.
Vagari vemaguta makuru pasi, vaine izvi mupfungwa, vagara vachishandisa kumeso kwemasiki. Nekudaro, munguva yechirimo uye yezhizha, tinoratidzwa kune dzakasiyana siyana dzekupfira, apo mishonga yemishonga inodzivirira kana kudzivirira kubva kuumhutu, marwekwe uye zvimwe zvipembenene zvinoshandiswa. Zvakare kana tichiita yekuchenesa dzimba, kunyanya kuchenesa nekushandiswa kwemidziyo yakasimba, tinofanira kushandisa masiki kuchengetedza turakiti rekufema, kuti tisaputire zviputi zvinokuvadza.
Asia kumeso masksBielenda facialsBielenda kumeso maskschinese kumeso masksakanaka kumeso masksyakanaka kumeso masks kubva kuRossmannmasks epambaHomemade kumeso masksmasasi emumba macneHomemade kumeso masksHomemade kudzoreredza kumeso masksHomemade blackhead masksmhando dzebvudzi remumbaimba yemasiki kumeso kwemakonzomishonga yekumba yemaski echisohebe facialshebe kumeso maskskugadzira sei kugadzira pasina glue uye maskndeapi maski kumeso iwe unokurudziraMaJapan echiso kumesoKoreya masksKoreya kumeso masksKoreya kumeso masks shopulomi lomi facialsmasikianti-smog masksmasks ekuvhiyamasks evarumekumeso kwemesomasks echisoavon kumeso masksagafia babushka kumeso masksladybug kumeso kwemasksBielenda kumeso masksmasks echiso evarumekumba kumeso masksHomemade kumeso masksHebe kumeso maskskuchenesa kumeso maskskutarisana kwemaski kumesochinzvimbo masksrossmann anotarisana nemasksSephora kumeso kwemaskssheet kumeso maskskumeso kwemasokisi mumabhonzovisa kumeso kwemaskiziaja kumeso kwemaskskumeso kwemeso mhukamasks evhudzimasks epambakumba kumeso maskszvinogadzirwa masksKoreya masksloreal kumeso masksmasks ekurapaacne maskskumeso kwemesoremakeke kumeso kumesomasutu mademamasks evhudzimoisturizing masksmoisturizing kumeso kwemasksHomemade moisturizing kumeso kumesoanodzivirira maskskuchenesa maskskumeso kuchenesa maskskuvandudza kumeso masikibvisa masksmasks emazisorossmann masksselfie chirongwa chemaskssheet maskssheet masks makumi mashanusheet masks setexfoliating kumeso maskskumeso kwemurumemissha facialsmasks akanakisaakanakisa kumeso kumesomasks echisikigomasiki echiso kumesomasiki echiso kumesomoisturizing kumeso kwemaskskushambadzira zvipfekoburashi rekushandisa maskiyakakurudzirwa kumeso masksnyanzvi kumeso masksnzira dzekubika dzakagadzirwa kumeso masksrossmann anotarisana nemasksrossmann anotarisana nemasksRussian kumeso maskssephora kumeso maskssephora kumeso masksganda79 maskszvakachipa uye akanaka kumeso maskszvakachipa kumeso masks
5 / 5 ( 15 mavhoti )